Shirqool Wadamada Khaliijka Iyo Isreal U Dhigeen Turkiga Oo La Khashifay Iyo Heshiiskaasi Qarsoodiga Oo Lasoo Bandhigay Waxa Uu...
Thursday, 10 January 2019 13:36
10/1/2019 (BNN) Shabkada wararka ee Middle East Eye ayaa daboolka ka qaaday shirqool halis ah oo dalalka Sacuudiga ,Imaratka ,Masar iyo Israel ay dejiyeen in meesha laga saaro awoodaha siyaasadeed ee ay dalalka Turkigu iyo Iran ku leeyihiin dalalka Syria iyo Ciraaq.
Wargeyska waxa uu sheegay in madaxa sirdoonka dalka Israel Yossi Cohin iyo wakiilo ka kala socday dalalka Sucuudiga Imaratka iyo Masar oo bishii December ee aynu soo dhaafnay ku kulmay caasimad Khaliijka ah oo aan la magacaabin ay qalinka ku duugeen wax uu ku tilmaamay shirqool .
Waxaa shabakadani sheegtay in madaxa sirdoonka dalka Israel uu u sheegay wakiiladaas in Iran ciidan ahaan looga takhalusi karo oo awoodeeda ciidan uu yahay mid jilicsan balse Turkigu uu leeyahay awood ciidan oo ballaaran oo aan la dhayalsan Karin.
Hadaba qorshayaasha shirqoolkaas waxaa ka mid ah in marka hore dalalkan ay aqbalaan in Syria dib loogu soo celiyo xubinimadeedii J/caratbta iyada oo lagu qancinayo madaxweyne Bashar inuu xakameeyo awooda Iran ku leedahay dalkiisa ,uuna u adeegsado oo keliya isagu sidii aabihii uu la dhaqmi jiray Iran balse Iran ay san isaga adeegsan.
Waxa ay dalalkan cabsi weyn ka muujiyern in kaalinta Turkigu ee Syria ay sii weynaanayso marka Trump uu ciidamadiisa kala baxo Syria, sidaa darteedna ay tahay in ay taageeraan Kurdiyiinta Syria ee dagaalka kula jira ciidamada Turkiga ee ka dagaalamaya waqooyiga Syria.
Qorshaha kale waxa weeye in laga saacido Trump inuu ciidamadisa kala baxo Afganistan waxana dhacday in shirkan kadib masuuliyiim Maraykan ah iyo wakiilo ka sicday Daliban ay kulan ku yeesheen Dubay sidii arrintaas loo xaqiijin lahaa.
Waxaa kale oo qorshahan ka mid ah in meesha laga saaro awooda siyaasadeed ee Turkiga ku leeyahay Sunniga Ciraaq. Iyadoo taas la fulinayo ayaa guddoomiyaha barlamanka ee dalka Ciraaq Maxamed Al-xabuusi oo hogaamiya isbahaysiga Sunniga ugu weyn dalka Ciraaq op booqasho ku tegay Riyaad bartamihii bishii December ee aynu soo dhaafnay ayaa la sheegay in la soo hordhigay inuu kala doorto inuu yareeyo awoodda Turkiga ku leeyahay amase isaga baxo isbahaysiga gebi ahaanba.
Hadaba ma u aragtaa shirqoolkan mid u hirgeli doona?
More in this category: « Warar Dheeraada Oo Kasoo Baxaya Gudoomiyaha Maxkamada Sare Ee Somaliland Oo Iscasilaya Iyo Isku Shaandhayn Muuse Biixi Qorsheeyay DAAWO: Somaliland Oo Si Kulul Uga Jawaabtay Hadalkii Ka Soo Yeedhay Madaxwaynaha Cusub Ee Maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni »